Ma ị ghaghị iji data maka azụmahịa gị, nyocha ma ọ bụ ọrụ, ọ dịghị ihe dị njọ karịa ịchere ibe maka ibu ọrụ na Netscape Navigator ma ọ bụ Internet Explorer. Mgbe ị na-egwugharị na ịntanetị, ị nwere ike iche nsogbu nke njikọ dị nro ma nwee ike ida ọtụtụ data ị chọrọ. Ọ bụrụ na ị na-elele ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog dị egwu na ọtụtụ puku peeji nke, ị ga - enwe ike ịpịgharịa ugboro ugboro iji nweta peeji ndị ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Obi dị m ụtọ na ihe omume weebụ wepụtara pụrụ iche na-eme ka ọ dịrị gị mfe ibufee saịtị kacha amasị gị n'enweghị nsogbu ọ bụla - fascinator hat hairstyle. Onye na-ewepụta weebụ bụ otu usoro nke na-enyere ndị nchọpụta, ndị nta akụkọ, ụmụ akwụkwọ, ndị ọchụnta ego, na ndị ahịa aka iwepụta data n'ụzọ dị mfe ma na-ele ibe weebụ dị iche iche dị elu. A kọwara ụfọdụ n'ime ngwaọrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya ebe a.